मोदीसँग लम्पसार उनकासँग यस्तो नाटक !
चन्द्रिका भण्डारी, काठमाडौं,१ जेठ । नेपालीमा एउटा उखान छ ,दाईलाई सक्दिन भाउजुलाई ... ठिक यस्तै चाला देखापरेको छ , मुलुकको सरकार र ठुला राजनीतिक दलका शिर्षहरुको चाल । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधान धार्मीक यात्रा भन्दै २ दिने भ्रमण गरि शनिवार स्वदेश फर्के ।
मोदीले निकै मीठो कुरा गरे, गौतम बुद्ध भुमी लुम्बिनी पनि आउछु भनिदिए गटट तालि बज्यो । नेपालसँग मिलेर अघि बढ्न तयार छु भने कांग्रेसका देउवालाई एक पटक सत्ता छाड्न परो भनेर नआत्तिनु पनि भने । मधेसमा महन्थलाई केन्द्रमा प्रभाव खै भने उनी ट्वा परे । यस्तो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ बर्ष ढुक्कले देश चलाउ भन्दै गरे । ओली दङ्ग परे पानै चावी उतै थियो अब टुङ्गियो ।
नेपाली जनमानसमा मोदीका प्रति नाकावन्दी र सीमा अतिक्रमणका विषयलाई लिएर ओलीले चु सम्म गर्न सकेनन् । उनले राष्ट्रवादको डायरी खोज्नै चाहेनन् । सकेनन् ।
मधेसको विकासमा एक अर्व ६० करोड दिने घोषणा गरेर राजधानी छिरेका मोदीले सोही दिन साँझको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोटा मोटा कुरा गरे विगत कोट्याउन पनि चाहेनन् । ओली साक्षी बसिदिए । यसरी नरेन्द्र मोदी जसरी पनि नाकावन्दीका पीडा र अन्य समस्याहरु भन्दा पनि नेपाली ध्यान आफूतिर खिच्ने सौहाद्रता र नरमीपन प्रदर्शन गरिरहे ।
नाम धार्मीक यात्राको बताउदै बुद्ध,जनकपुर,सगरमाथा,मुक्तीनाथ,लुम्बिनी,काठमाण्डु,ललितपुर ,भक्तपुरको प्रशंसामा शब्द खर्चिए । ताली लिने काम मज्जैले भयो । उता भाजपाकै सांसद कीर्ति आजादले भारतबाट नेपालीहरुको मन दुखाए । फेसबुके बाटो रोजेका उनका बारेमा ढिलो चाडो सबै दल एक ढिक्का देखिए । नकी मोदी दादागीरीमा कोही बोलेन् ।
आखिर कीन ? यसरी आफ्नै भ्रमणको अवस्थामा उतैबाट बोल्न लगाएर नरेन्द्र मोदी डबल रोल खेलिरहेका त छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ? भाजपा सांसद कीर्ति आजादले ट्वीट गरिदिए– मोदीजी, २ सय वर्ष अघि भएको सन्धिको समय सकियो, जनकपुर अब फिर्ता माग्नुहोस् ।
यता २ नम्बर प्रदेशका आठै जिल्लाका जनताको भीड ल्याएर एकसय २० किलोको माला तिन स्थानमा परिहेका मोदीसँग समस्याका बारेमा श्रीगणेश गर्नु पर्ने कारण के ? मधेसका जनताको भीडमा मधेस देशको स्वागत भनेर व्यानर उचालियो ।
मोदीको स्वागत गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यो सब देखे तर नाकावन्दीपछि पहिलोपल्ट मोदीको स्वागतको बहानामा मधेस झरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जवाफ दिएनन्, सुरक्षाकर्मीलाई मधेस देशको ब्यानर हटाउन आदेश पनि दिएनन् । यतिमात्र होइन, मुख्यमन्त्रीले हामीमाथि संवैधानिक रुपमा केन्द्रले विभेद गरेको उजुरीसमेत ठाउमै भयो ।
यो सब स्वाधीनतावादी ओली सरकारलाई सह्य भयो । बरु राजधानीबाट कमल थापाले १८१६ को सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालका भूभाग भारतले फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए । एमालेकै सांसद योगेश भट्टराईले मिथिला फिर्ता माग्नुपर्ने कुरा भनेको कीर्ति आजादलाई दिमाग खुस्किएको भनेर डण्डा बजाए ।
भलै नेपाली कांग्रेसले समेत आजादको फेसबुकका बारेमा आज चित्त दुखाएको छ । तर राष्ट्रिय समस्याका बारेमा न ओलीको बोली फर्फरायो न कांग्रेस बोल्यो । नत प्रचण्डले नै औंला ठड्याए ।